Top 5 Kasị Beautiful Oké ọhịa Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Kasị Beautiful Oké ọhịa Na Europe
Anyị na-edepụta ihe a 5 Kasị mara mma ọhịa na Europe dị na oge maka ezumike Oge Ememe! Ihe kachasị mkpa maka ezumike ndị njem bụ osimiri. Mana Europe nwere ụzọ karịa ikpere mmiri. Sonyere anyị dị ka anyị na-a stomp gburugburu ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mara mma ọhịa na Europe.
Echefu banyere jupụtara osimiri na ha oké ụmụ na pestering hawkers. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike iti udo na obi iru ala nke a ọma ọhịa. N'ịbụ uwa n'ezie bụ ọgwụgwọ, yabụ ka anyị were gambol akwụkwọ gbara gburugburu ụfọdụ kacha mma na Europe.
Anyị 1st On The List Of Kasị Beautiful Oké ọhịa Na Europe – The Bavarian Forest, Germany
The Bavarian Forest National Park bụ mbụ German na nnukwu ogige mba, na otu n'ime ndị kasị mara mma ọhịa na Europe. Gịnị mere i nwere ike ịjụ? Anyị na-eche mkpesa idu ke ya mfe ma ukwuu wilderness. N'ihi na nwoke na-ahapụ ya nke ọma naanị! The park kwere nkwa a breathtaking odida obodo, ebube ọnụ ọnụ (ndị kasị ama ndị na- Grosser Falkenstein, Lusen, na Grosser Rachel), ọtụtụ hiking na ıgw `ụzọ ụkwụ, mirror ọdọ mmiri, ohere egwuregwu, a na-adọrọ mmasị treetop ije, na ndị ọzọ.
N'ịchọ iburu ezinụlọ na-akpali akpali na pụrụ iche njem ozo ahu n'ime ogige? Na treetop na-eje ije (Baumwipfelbad) na Bavarian Forest National Park na-ekwe nkwa a nso zutere ọdịdị na njem maka ezinụlọ ya dum. Walzọ a na-enweghị osisi nke dị mita otu narị na narị atọ na-eduga ndị ọbịa gaa na ntọala ụlọ elu ahụ nke dome, àjà mma echiche nke oké ọhịa na ụzọ. Ị nwekwara ike ịhọrọ isonye na-akpali akpali na-eme na-aga. Otú ọ dị, nke kacha mma na-echekwa na nke ikpeazụ. Site na oche 44 nke dị elu, ị ga-esi eri anya gị na Iweputa echiche nke oké ọhịa na ọbụna snow-clad Alps.
Mmadụ Bịa ka anụ wilderness! Trillemarka Rollagsfjell Nature Chebe bụ otu n'ime ndị ikpeazụ na-amaghị nwoke ohia ebe na mba. Nke a bụ gị aga na-etinye maka hiking n'etiti ochie ọhịa ibu, ski na-akpatụbeghị aka ugwu, na azu na n'ezie ọmarịcha rivers na ọdọ mmiri. E nwekwara ihe n'ụba, 93 na ngụkọta, nke Red Edepụtara umu. Jide n'aka na ị soro bulie onu na ihe oyiyi a na-akpọ Madonna na nwa, dị 100 mita n'èzí ogige, maka ịrịba echiche nke ndagwurugwu na karịrị. Weta nza nke n'ígwé, dị ka ihu igwe adi agbanwe ofụri ebe.
The National Park nke Belluno Dolomites gbatịrị si Cismon ndagwurugwu, ruo mgbe ndị Piave ndagwurugwu na e hiwere na 1990 ichebe a n'ókèala nnukwu eke uru, nke esesịn enweta dee ọtụtụ narị afọ maka ịma mma ya nanị na osisi ya ụkọ. N'ihi ya, mkpebi e mere iji chebe ya 32000 hectare nke stupendous eke Gburugburu si oyi egwuregwu mmepe.
Mpaghara ugbu a bụ mba nketa saịtị nke-enweghị atụ uru ebe, n'ụzọ ziri ezi, ọdịdị iwu. Ihe anyị hụrụ n'anya banyere ogige a bụ ọnọdụ a na-akpabeghị aka na ebe a na-enweghị ike ịbanye na ya na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ Alps, nke na prehistoric ugboro hụrụ guzobe kpụkọrọ (ikpeazụ Agbahapụ n'elu 10000 afọ ndị gara aga!).
Iche adị n'etiti Tre Cime di Lavaredo na Belluno Dolomites, mara dị ka acha ugwu esighịkwa agba nke rockface. Enye ume Plateaux na vertiginous rockfaces: ndị a bụ haunts nke ọlaedo ugo, kere eke fọrọ nke nta kpara n'ihi na ha amara, ha di nma ma nwekwaa ugwu site na igwe na ike diri udiri ha.
Anyị na-atụ anyị nyere unu ezuru ihe nleta Belluno Dolomites na ihe mere anyị na-eche na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mara mma ọhịa na Europe.
ọla ikpe, France
The ikpọ Parc National des Ecrins bụ onye nke iri French n'ogige ntụrụndụ mba na nke abụọ kasị ukwuu mgbe Vanoise. The 1000 sq km echebe ebe gafere Hautes Alpes na Isere ngalaba, ndinyanade mbịne n'etiti Bourg d'Oisans, Briancon, na Embrun. The park anọgide ukwuu n'ime emetọghị emetọ ekele ya n'ime obodo ebe na N'ezie, ọ bụ na ndepụta anyị nke ọmarịcha oke ọhịa na Europe.
A na-akọwa ugwu ugwu ahụ nke ogige ahụ site na glaciers na-asọ asọ na osimiri na-asọ ọsọ, nke kere nkpoda warara ndagwurugwu. ke ndaeyo, hikers, rock climbers, ugwu igwe, na ndị na-agba ọsọ mmiri na-enuga n'ogige ahụ iji nwee ọmarịcha ihu igwe na ịma mma agbapụ. na oyi, snowshoeing, obi na obi skai touring na ugwu na-ewu ewu. The skai eme nke Alpe d'Huez anọdụ dị nnọọ n'ofè ókè nke ogige. nke bụ 10 km elu switchbacks si Bourg d'Oisans.
Lyon Airport na Paris insgbọ oloko
Anyị ikpeazụ On The List Of Kasị Beautiful Oké ọhịa Na Europe – A Forest Na A Football Stadium, Netherlands
The ebigh'ebi Ndọrọ nke Nature bụ ihe ntinye nwa oge nke na-agbanwe Worthersee ama egwuregwu bọọlụ. Ọ bụ nsogbu na Klagenfurt, ma ugbu a, a oké ọhịa na ihe art echichi!
Around 300 osisi, ụfọdụ erikpu isii tọn ọ bụla ga-ọma dọgharịala n'elu ẹdude football pitch. Nke a, nye echiche nke a Central Europe ọhịa. ozugbo dọgharịala, oké ọhịa ga na-na a ndụ nke ya, gbanwee agba ka oge na-aga ma na-adọta anụ ọhịa.
Gaa gaa si 10 m ruo mgbe 10 pm kwa ụbọchị (free ntinye)!
Ị dị njikere na-esi isi nke ọhụrụ ụwa na mmiri akpaetu? Iji na-enweta sensashion nke ìhè anyanwụ akachia site osisi na nēfe ọkụ onyinyo n'elu ala? Mgbe ahụ hop jidesie Save A Train na akwụkwọ gị Train Ticket ọ bụla otu n'ime ihe ndị kasị mma ọhịa na Europe, n'ime nkeji!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top 5 Kasị Beautiful Oké ọhịa Na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-forests-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ọhịa #ọhịa #forresttrip #ibugo onu #agwa ezumike